Ukuhlaziywa kwe-Splashdrone 3+ ngeSpanishi, idrone engangeni manzi eSwellPro | Izindaba zamagajethi
Ukuhlaziywa kwe-Splashdrone 3+ ngeSpanishi, idrone engangenwa ngamanzi eSwellPro
UMiguel Gaton | | drones
Namuhla sikulethela ku-Actualidad Gadget ukubuyekezwa kwe-drone I-Splashdrone 3+ yi-SwellPro, i-drone engangeni manzi ekwazi ukundiza ezimweni zesimo sezulu esibi kakhulu futhi okuthi ngenxa yezici zayo ilungele ukuzijwayeza eceleni kwezemidlalo yamanzi, ebhishi noma njengomsizi wokudoba olwandle. Kuyi-drone ehambisanayo, eqinile, eqinile futhi elula yokukhanya yedivayisi yalolu sayizi futhi egqame kakhulu ngombala wayo osawolintshi ogqamile nokunikela ngokuhlola okulula impela. Intengo yayo eyisisekelo ingu- $ 1.200 futhi Ungayithenga ngqo kusuka kusixhumanisi. Ngokulandelayo sizobona yonke imininingwane yefayela le- I-Splashdrone 3+.
1 I-drone engenamanzi ezosebenza emanzini
2 I-Splashdrone 3+ kulula kakhulu ukuhlangana
3 Izesekeli zeSplashdrone 3+
5 Ukuhlola i-Splashdrone 3+
7 Isiphetho mayelana ne-Splashdrone 3+ drone
8 Thenga Izixhumanisi
9 Ividiyo ye-Splashdrone 3+ engangenisi manzi
10 Umbono woMhleli
11 Izinzuzo nokuqeda
I-drone engenamanzi ezosebenza emanzini
Into yokuqala ekushayayo uma ubona idrone ukuthi izindlu zayo azinamanzi nalokho ivikela zonke izinto ezibalulekile ze-drone ngobunzima obusezingeni eliphakeme. Okuwukuphela kwento ehlala ingamboziwe izinjini futhi lezi zilungiselelwe ngokuphelele ngefilimu ebavikela emanzini anosawoti ngakho-ke le divayisi isilungele ukuhlala futhi isuke emanzini ngaphandle kwenkinga enkulu, iba manzi noma icwilise kancane.
Ngenxa yalezi zici, i-drone yakhelwe ngokukhethekile ezemidlalo yamanzi, ukudoba noma umsebenzi wokutakula ngenxa yehhuku elifakwe eceleni kwekhamera futhi esizobona kamuva.
Ngabe ufuna ukujabulela iSlashshrone 3? Kulungile manje Ungayithola ngentengo engcono ngokuchofoza lapha >>
I-Splashdrone 3+ kulula kakhulu ukuhlangana
Ukuhlanganiswa kweSplashdrone 3+ kulula kakhulu ukukwenza futhi singakulungela ukundiza emizuzwini embalwa. Ngokuyisisekelo okufanele sikwenze:
khweza igiya lokufika esakhiwa amashubhu amabili ekhabhoni afakwa emigodini esisekelweni sedrone. Ukuzifaka kalula, kufanele uqale ufake uhlangothi olulodwa maphakathi, bese ufaka olunye uhlangothi bese ucindezela ngobumnene kuze kufakwe zombili kuze kube sekupheleni. Kuyigiya lokufika elincane ngandlela thile kodwa iqiniso ukuthi lilula kakhulu futhi liyifeza ngokuphelele inhloso yalo.
beka ophephela. Ukuze senze lokhu, kufanele nje sicindezele ophephela phansi kancane bese senza ukujika okuncane ngokulandela izinkomba ezidwetshiwe kuma-rotor.
vula isembozo esiphezulu se-drone ku beka ibhethri ngaphakathi. Iza inikezwe i-velcro encane ukuyibamba ngokuphelele nokuyivimba ekuhambeni nasekusiqiniseni ngesikhathi sendiza.
beka i-gimbal ngekhamera ye-4k. Ukubekwa kwayo kulula kakhulu ngoba kufanele nje uyixhume endaweni yayo futhi uyiqinisekise ngophini ukuze ngemizuzwana embalwa ungashintshanisa isesekeli esisodwa kwesinye uma kudingeka.
Futhi yilokho, ngokulandela lezi zinyathelo ezilula ezi-4 sine-drone elungele ukundiza nazo zonke iziqinisekiso.
Izesekeli zeSplashdrone 3+
Ukwenza lula ukuthuthwa nokugcinwa, i-drone yethulwa ngecala eliqinile, eliqinile futhi elenziwe kahle. Esitolo esiku-inthanethi seSwellPro ungabona izesekeli ezahlukahlukene nezinhlobo zamakhamera ongayisebenzisa ne-Splashdrone 3+. Umkhiqizo uza nokuqedwa okune okuhlukile: ukudoba, ukuqopha ifilimu, ukuhamba ngesikebhe nokusesha nokusindisa ngokuya ngezidingo zakho.
Esethu sihlolisise ikhithi yokusesha nokutakula okuza nemodyuli yokukhokha-3 equkethe i- Ikhamera engu-4k egibele kwi-axis gimbal eyodwa futhi lokho kufaka ne idivayisi encane yokuqalisa ngesimo sehhuku ongahambisa ngalo futhi uqalise izinto ezisuka emoyeni. Njengoba kungenakuba ngenye indlela, zonke izesekeli nezintambo nakho akunamanzi.
Intengo yemodyuli yokukhishwa ilayishwa ngekhamera ye-4K ne-1 axis gimbal ngu- $ 329 y ungayithenga ngokuchofoza lapha.
I-Splashdrone 3+ iza nefayela le- i-transmitter elula kakhulu ne-ergonomic efaka isikrini se-LCD esine-5 intshi ukwazi ukubona ikhamera ye-drone futhi lokho kusinikeza nge-telemetry eyisisekelo edingekayo ngesikhathi sendiza njengejubane ledivayisi, ubude, ukuthambekela, ukushaja kwebhethri, ukulungiswa kwekhamera, isikhathi sendiza, ibanga maqondana thina, njll.
Ngalesi siteshi singakwazi lawula kokubili ukundiza kwe-drone neminye imisebenzi efana nokuqala ukurekhoda kwekhamera, ukuthatha izithombe, ukuvula ingwegwe ukukhipha umthwalo, ukucindezela inkinobho yokubuyela ekhaya, njll.
Ekuvivinyweni kwethu sinezinye futhi Izibuko ze-FPV indiza yomuntu wokuqala, ehambelana ngokuphelele ne-drone futhi eza ngombala ofanayo we-orange. Lezi zibuko ziza zixhunywe ngesikrini esiphakeme se-LED esine-resolution ephakeme esizokucwilisa enjabulweni yokuhlolwa kwe-FPV. Izindleko zamagogogo e-FPV yi- $ 199 futhi ungabathola kulesi sixhumanisi.
Ukuhlola i-Splashdrone 3+
I-drone inikezwa izindlela ezahlukahlukene zokundiza, ukuze ivumelane nazo zonke izidingo:
Imodi ye-GPS: Le yimodi yendiza ezenzakalelayo futhi ikuvumela ukuthi ujabulele izindiza ezizinzile ngosizo lwe-GPS.
Imodi ye-Cruise: ngale modi ungashayela i-drone ngesandla esisodwa nje, ngoba idivaysi izohlala endaweni ephakeme njalo futhi nge-jostick ungayihambisa ngokuvundlile ngendlela ebushelelezi bese urekhoda amavidiyo asezingeni eliphakeme.
Imodi ye-ATTI: yimodi ye-agile kakhulu futhi ezokuvumela ukuthi ufinyelele ngejubane eliphakeme lokundiza, kepha kusobala ukuthi futhi yiyona ethambekele kakhulu ezingozini.
Ngaphezu kwalokho, i-Splashdrone 3+ inendlela ekhethekile yendiza ebizwa ngokuthi Ubushelelezi + ngalo sizolawula indiza ngamathatimitha amabili etholakala ngaphansi kwe-jostick futhi lokho kuzosivumela ukuthi sikwazi ukulawula kakhulu ukujikeleza nokuqondisa kwe-drone, ngakho-ke baphelele ukujabulela indiza enembile namavidiyo azinzile kakhulu.
Kubo bonke labo abathandi bokuhlola ngezinhlelo zokusebenza, i-drone iyabavumela engeza isixhumanisi seGroundStation ukuze ulawule idivayisi kusuka ku-smartphone yakho. Intengo yalesi sesekeli ngu- $ 99 (ungayithenga kusuka lapha) futhi ikuvumela ngenxa yohlelo lokusebenza I-Swellpro Fly sebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokundiza ezihlakaniphile ezifana nomsebenzi othi "ngilandele", undizela endaweni eboniswe emephini, uzungeze iphoyinti elithile, noma uhlele umzila wendiza enamaphoyinti amaningi ngemephu.
Lapha sikunikeza ifayela le- igalari enazo zonke izithombe ze-Splashdrone 3+, izesekeli zayo kanye nezibuko ze-FPV.
Isiphetho mayelana ne-Splashdrone 3+ drone
I-Splashdrone 3+ drone modular engenamanzi eyi- inketho enkulu yokuthenga kubo bonke abafuna i idivayisi esebenza kahle, isilawuli esilula futhi esingamelana namanzi. Umklamo wayo we-modular nenombolo enkulu yezesekeli zivumela ukuthi idivaysi iguqulwe ngezidingo ezahlukahlukene, okungangabazeki ukuthi imele ukonga okuphawulekayo.
Uma unesifiso thenga i-drone engangeni manzi esiyihlaziyile kule ndatshana kanye nayo zonke izesekeli, ungakwenza ngezixhumanisi ezilandelayo:
Thenga i-Splashdrone 3+ drone
Thenga ikhamera ye-4k ene-axis gimbal eyodwa
Thenga izibuko ze-FPV - S3
Ividiyo ye-Splashdrone 3+ engangenisi manzi
Ngemuva kwalokho unga bona i-Splashdrone 3+ drone isebenza kweyodwa yamavidiyo wokukhangisa womkhiqizo.
Kulula kakhulu ukushayela
Izesekeli eziningi ziyatholakala
Intengo yezinye izesekeli eziphakeme ngandlela thize
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » drones » Ukuhlaziywa kwe-Splashdrone 3+ ngeSpanishi, idrone engangenwa ngamanzi eSwellPro
Imidlalo eyi-10 engcono kakhulu yokusinda ye-PC
Izinhlelo zokuqapha ukusebenza kwekhompyutha mahhala